Okuzenzakalelayo ice ibhokisi amakhukhi yakhelwe amakhukhi ukwenza umshini - China Shanghai Hanjue Imishini
Okuzenzakalelayo ice ibhokisi amakhukhi yakhelwe amakhukhi ukwenza umshini
Incazelo: Ikhukhi yakhelwe kungenziwa egcizelele nezinhlobo design. Kubonakala ngezindlela eziningi ukwenza i-cookie, abanye ezitolo ezincane namakhosikazi ukwenza ukudla ngesandla, it has a intengo okumangalisayo kanye nobudala abantu ezahlukene kanje ukudla. Izindaba ezinhle wukuthi yethu HJ-860 encrusting umshini ungenza ukudla nge umthamo eliphezulu. unjiniyela wethu izokwengeza ukuncishiselwa wire emshinini ukwenza amakhukhi, ngale ndlela wonge imali futhi wenze amakhukhi ezinhle ukubukeka. Ungachofoza isiqophi sibone ukuthi uyoke usebenze i ...
Izindaba ezinhle wukuthi yethu HJ-860 encrusting umshini ungenza ukudla nge umthamo eliphezulu. unjiniyela wethu izokwengeza ukuncishiselwa wire emshinini ukwenza amakhukhi, ngale ndlela wonge imali futhi wenze amakhukhi ezinhle ukubukeka. Ungachofoza isiqophi ubone ukuthi imisebenzi umshini futhi izinkinga sicela uthintane yokuthengisa bethu.
inombolo Model HJ-860
1) izinhlobo eziningi amakhukhi singenakukwazi yakhelwe.
2) egcizelele umshini, silayishe ezinye izinhlelo umshini emshinini.
3) English,, sesiShayina Arabic uyazikhethela ..
4) ukuqeqeshwa khulula siyonikwa lapho ukuhlolwa ikhasimende umshini.
Previous: Okuzenzakalelayo ice cream mochi ukwenza umshini
Okulandelayo: Okuzenzakalelayo izinhlanzi ibhola inyama ibhola okwenza umshini